Otu esi aga nzukọ ịde blọgụ $ 2,000 maka $ 49 | Martech Zone
Otu esi aga nzukọ ịde blọgụ $ 2,000 maka $ 49
Wednesday, July 16, 2008 Sunday, October 21, 2012 Douglas Karr
Enwere otutu nzuko ịde blọgụ na-eme gburugburu obodo kwa afọ. Uru ịga ogbako ịde blọgụ buru ibu, na-ekpughe gị njikarịcha njin ọchụchọ, ederede ederede, teknụzụ blog na otu esi eme ka ịde blọgụ gị nwee uru. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị bịara ji kwụọ ihe ruru $ 2,000 iji gaa nzukọ ndị a.
Kwesighi ịkwụ ụgwọ $ 2,000, n'agbanyeghị! Kedu ka $ 49 si ada?
Obodo ndị na-ede blọgụ si gafee Indiana ga-ezukọ na IUPUI Campus Center na August 16-17th, 2008, maka Bọọgụ Indiana 2008, a 2-ụbọchị ịde blọgụ na-elekọta mmadụ media ogbako na Aims na-akwalite mmụta, ọhụrụ na mmekota n'etiti Indiana ngwa ngwa na-eto eto ịde blọgụ obodo. Nzukọ a bụ nke Ilọ Akwụkwọ IU nke Informatics na-akwado.
Blog Indiana 2008 bụ nzukọ ụbọchị 2 maka ma ndị na - ede blọgụ nwere ọhụụ. Oge ga-agụnye isiokwu ndị dị ka ịde blọgụ maka ndị mbido, iji blọọgụ na azụmahịa gị, monetizing blog gị, ịde blọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na isiokwu ndị dị elu. N’oge gara aga, imirikiti nzukọ ịde blọgụ na teknụzụ metụtara oke ọnụ ma ọ bụ tere aka na steeti. Blog Indiana 2008 na-achọ ịbute ndị na-ede blọgụ Hoosier dị ọnụ ala, ọnụ ahịa dị elu.
Nye Kwesịrị ?ga?
Studentsmụ akwụkwọ, ihe omume ntụrụndụ na ndị ọkachamara na-agba ume ịga na netwọk ma mụta. Ahụmahụ na ịde blọgụ ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta abụghị ihe achọrọ iji sonye; onye ọ bụla nwere mmasị na nkà na ụzụ na mgbasa ozi ọhụụ na-anabata gị.
Oche abughi naanị ndị bịara 200.
The Ulọ IUPUI Campus na IUPUI Campus na Indianapolis, IN
Gịnị kpatara $ 49?
Nke ahụ bụ ajụjụ nde dollar, nri? Nzukọ a abụghị maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ okwu maka ndị na-ede blọgụ A-ndepụta. Ọ bụ ihe gbasara nchịkọta ndị ọkachamara ebe a na mpaghara ahụ na-agba mbọ inyere ndị ọzọ aka ka ha bido usoro mgbasa ozi na ịde blọgụ. Ọ bụkwa banyere ijikọ anyị niile ndị na-ede blọgụ ugbu a. O doro anya na ị ga-esi na ogbako a were $ 2,000 ndụmọdụ na ncheta - mana ọ bụghị maka ego ahụ.
Debanye aha ebe oche fọdụrụ!
Deba aha taa! Oche nwere oke ma ha na-aga ngwa ngwa.
Tags: blog Indianaịde blọgụ ogbakoomumeIndianaihe omume ahia
Zuo ike n'udo, Enyi m Mike
Zọ ise dị mfe iji meziwanye agụ saịtị gị
Nkume Nkume Atọ
Jul 16, 2008 na 8:51 PM
Ihe a dikwa egwu. N'ezie ọ na-akpali m iche echiche banyere otu ọmarịcha ogbako Mid-Atlantic nwere ebumnuche yiri ya nwere ike isi rụọ ọrụ. Enwere ezigbo mahadum dị naanị kilomita ole na ole n'okporo ụzọ (UVA)… hmmm. Ọ fọrọ nke nta ka m daba n'ụgbọala wee kwaga Indiana maka ụgwọ ahụ.
Jul 21, 2008 na 9:08 PM
Eji m n'aka na ogbako a ga-abu oke iwe! Akwa post! Anọ m na-ekwu okwu na blogher mere Agbaghara eziga banyere Blog Indiana urua - ga-biputere banyere ya n'izu a!
Lelee anya izute gị ebe ahụ!